म बुक भइसकें !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
म बुक भइसकें !
जेष्ठ ११, २०७६ वन्दना ढकाल
मेसेन्जर च्याटमा आउने एक जना साथीलाई मैले ठट्टा गर्दै भनेँ, ‘तिमी मसँग धेरै बात नमार है, म पहिल्यै बुक भइसकेँ  । ’ उसले पनि ठट्यौली पारामै उत्तर दियो, ‘ल, त्यसो भने मैले तिमीलाई रि–बुक गरेँ  ।
च्याटको सिलसिला त्यत्तिमै टुंगियो । तर, बुक र रि–बुकको संवादपछि यसो गमेर हेरेँ– के म वस्तु हुँ र बुक हुनका लागि ? हुँ भने कसरी र कतिचोटि म बुक भइसकेँ ?
आफैंसँग गम्ने सिलसिलामा आफ्नै शरीरबारे घोत्लिन थाल्छु । मेरा साराका सारा अंगहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बुक गरिसकेको पो रहेछ ! हत्तपत्त टाउको छाम्छु, मेरो कपाल कुनै कम्पनीको ‘गुणस्तर तथा नापतौल विभाग’ मा परीक्षण गरिँदै रहेछ । बडो गम्भीर मुद्रामा कपाल–गुणस्तर विभागको प्रमुख भन्छ, ‘तिम्रो कपाल त रद्दी र कहिल्यै लामो नहुने हुँदै गइरहेको छ । तिमीले हाम्रो कम्पनीको स्याम्फु, कन्डिसनर प्रयोग गरेनौँ भने तिम्रो प्रेमीले तिम्रो कपाल नै सुम्सुम्याउन छाड्नेछ । हेर, हेर चायाँ ! उत्पातै रहेछ चायाँ पनि ।’
हँ, के भन्छ यो गुणस्तरे डाक्टर ? ‘महिलाको रूपको सार्थकता कपालमै छ । कपाल नै भएन भने प्रेमीले सुम्सुम्याउने त के, प्रेमी नै लापत्ता हुन बेर लाउँदैन,’ विभागकै अर्को सदस्यले कपालचिन्ता व्यक्त गर्‍यो ।
‘आ... होस्,’ भनेर पाइला अगाडि बढाएँ । कपाल विभागको दैलामै सिन्दूर विभागको बडाहाकिम बाटो छेकेर बसेको रहेछ । मलाई च्याप्प पाखुरामा समातेर मेरो सिउँदोमा कुन कम्पनीको सिन्दूर लगाउँदा मेरा श्रीमान्को जीवनरेखा लामो हुन्छ भनेर प्रवचन दिन थाल्यो अनि सिन्दूरका विभिन्न स्याम्पल देखाउन लाग्यो । सिन्दूरे–हाकिम अर्को स्याम्पल देखाउन टेबुलमुनि के झुकेको थियो, म त्यहाँबाट सुइँकुच्चा ठोकें । बीचैमा जोडले ठोक्किन पुगें, लिपिस्टिक कम्पनी साहुको छातीमा । लिपिस्टिक साहु पानीको कमीले फुट्न थालेको मेरो ओठ हेर्दै चुक्चुकाउन थाल्यो, ‘अहो, यस्तो कलिलो उमेरमै ओठको लाली हराएछ । ओठमा लाली नै हराएपछि तिम्रो प्रेमीले कसरी म्वाई खाला !’ उसले चिन्ता यसरी व्यक्त गर्‍यो, मानौं उसको कम्पनीको लिपिस्टिकबिना म बर्बादै भइसकेँ । उसले लालीका प्रकार विस्तार गर्‍यो– यो प्रेमीलाई भेट्नुअघि, यो प्रेमीलाई भेटिसकेपछि, यो घाममा हिँड्दा, यो न्वारनमा जाँदा, यो हस्पिटल जाँदा, योचाहिँ मलामी जाँदा... । नाना तरहका लिपिस्टिकका प्रकार सुनाइरहँदा मेरो मुखबाट फ्याट्ट निस्क्यो, ‘मेरो त प्रेमीसँग ब्रेकअप भइसक्यो, त्यसकारण लिपिस्टिक लगाउनुको अर्थ छैन ।’ उसले तत्कालै जवाफ दियो, ‘किन नहुनु अर्थ ? ब्रेकअप भएपछि रुँदा लगाउने लिपिस्टिक छ । त्यसले ब्रेकअपको हिक्कहिक्कको ओठको थरथरलाई कति सुन्दर भाव दिन्छ भने कुरै नगरौँ ।’ ऊ ओठको थरथराहटमा चम्किरहेको लिपिस्टिक विज्ञापन कल्पन थाल्यो । म बल्लतल्ल लाली साहुबाट फुत्केर बाहिर निस्कें ।
बाहिर निस्कनासाथ ‘चर्म तथा चर्मधर्म पालन विभाग’ को आँगनमा नराम्ररी पछारिन पुगेँ । विभागका हेडमास्टरले एकचोटि मेरो गालाको छाला ताने, अर्कोचोटि हातको छालाको रङ हेरे र प्रतिक्रिया दिए, ‘ओहो तिमी त काली पो रहिछौ । पक्कै तिम्रा कुनै प्रेमी छैनन् । यस्तो कालो रङले कसरी बिहे होला र ? तिम्रो जिन्दगी यही कालो रङले बर्बाद पार्ने भयो । तर, चिन्ता नगर । मेरो कम्पनीको क्रिम, पाउडर, फेसवास लगायौ भने तिमीलाई हेर्ने र प्रेम प्रस्ताव राख्ने केटाहरूको लाइन लाग्नेछ ।’
मेरो छाला यति बिघ्न ‘कुरूप’ छ ? कालो रङ यस्तो कुरूपताको प्रतीक हो ? म कहालिएँ । अनुहारको छालै कालो भएपछि जिन्दगी नै अँध्यारियो नि ! एउटी केटीमान्छेलाई केटाहरूले हेर्दै हेरेनन्, प्रेम प्रस्ताव राख्ने नै भएनन्, अनि बिहे नै भएन भने त जिन्दगी सखाप ! मेरो छाला फुस्रो, चिल्लो कस्तो छ, त्यसको जाँच गर्न चर्म विभागका अनेक शाखाहरूले दिन तय गरे । मेरो छालालाई जतिसक्दो गोरो बनाउन गोरा–क्रिम–कम्पनीका साहुहरूले पटकपटक मेरो अनुहारझरि क्रिम धसिरहे । अनेक ब्रान्डका त्रिम धसेर प्रयोगमाथि प्रयोग गरेको वर्षदिन पुगिसकेको थियो । एक वर्षसम्म ती ब्रान्ड मालिकहरूले ऐनामा हेर्न बन्देज लगाएका थिए । जब वर्षदिन पुग्यो, उनीहरूले घोषणा गरे, ‘तिम्रो अनुहारमा गोरोपन आइसक्यो । जाऊ अब घर ।’ म त पुलकित भएँ । उनीहरूको सर्त थियो, ‘घरमा पुगेर मात्रै ऐना हेर्नू ।’ म हतारमा घर पुगेँ । आमाका अगाडि फर्‍याकफुरुक गर्न थालेँ । आमाले पुलुक्क मुखतिर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘थुतुनोमा जातिबित्ती किरिम धसिचेस्, धोएर आइज !’ मेरो सारा हिँउगोरो उमङ्ग आमाको एक हप्काइमा पखालियो । गोरोपनको पीडाबाट बल्लतल्ल बौरिन थालेकी थिएँ, गोरो बनाउने अनेकखाले क्रिमको मार सहन नसकी मेरो छालाले विद्रोह गर्‍यो । छालामा मसिना बिमिरा उम्रेर चिलाउन थाल्यो । अनुहार यसो छाम्छु त, रूखकटहरको बोक्राजस्तो भइसकेको रहेछ । क्रिम लगाउनुअघि अनुहार अति मुलायम थियो । आत्तिँदै फेरि चर्मरोग विभागमा पुगेँ । उसले आश्वासन दियो, ‘मेरो उपचारले तिमीलाई निको हुन्छ... यो औषधि नियमित लगाऊ, नभए अर्को औषधि फेरौँला ।’ उसले पनि अनुमान र परीक्षणमाथि परीक्षण सुरु गर्‍यो ।
बल्लतल्ल अनुहारबाट ध्यान हट्दै थियो, मेरा स्तन फेसनअनुरूप नभएको छ्वास्स कसैले सुनायो । साथीहरूले मुन्ट्याउँदै कस्मेटिक सर्जरीतिर पुर्‍याए । सर्जरीबाट सातो उड्छ मेरो । त्यसो भए के गर्ने त ? साथीहरूले नै मलाई अन्तर्वस्त्रका विभिन्न कम्पनीहरूमा पुग्ने उपायसहित सान्त्वना दिए । ती कम्पनीसाहुले भने, ‘केही छैन, तिम्रा लागि हामीले सिलिकन फम उत्पादन गरेका छौँ ।’ उफ् ! उफ् ! कताकता के–के मिलाऊँ अब मैले ? त्यसपछि त भटाभट मेरा उद्धारकहरूले मलाई घेरा हाल्न थाले । मलाई ओल्टाइपल्टाइ गरेर उनीहरुले घोषणा गरे :
‘पेट र पिडुँलामा धर्का छन् । धर्काहरण क्रिम लगाऊ, नत्र छोटा लुगा लगाउन मिल्दैन । शरीरभरि रौँ छन् । सुन्दर महिलामा रौँ हुनु शोभा हुँदैन, त्यसकारण त्यसलाई उखेल, खुर्कने क्रिम वा रेजर लगाऊ । नङको रङ राम्रो छैन । बारअनुसार नङपालिस नछुटाई लगाऊ । कद होचो छ । सदासर्वदा हाइहिल जुत्ता लगाऊ । उस्तै परे बेडरुमसम्म पनि हाइहिलमै पुग ।’
मुक्तिदाता र उद्धारकहरूको रुचि मेरो पाठेघरमा पनि उत्तिकै रहेछ । सयौँ परिवार नियोजन साधनका कम्पनी, विभिन्न परीक्षण विभाग एवम् निजी हस्पिटल पनि मेरो पाठेघर बुक गर्न लर्को लागिरहेका रहेछन् । अनेक नामका सुई, चक्की, धातुका जन्तर आदि गर्भनिरोधक भनिएका रासायनिक पदार्थको परीक्षण गर्न उनीहरू जम्जमाएर बसेका रहेछन् । अघिल्लो पंक्तिमा २४ घण्टे गर्भनिरोधक पिल्सको साहु हातैमा चक्की लिएर बसेको रहेछ । भन्दै छ, ‘यो खाऊ, अनि निर्धक्क होऊ ।’ परिवार नियोजनका साधनका व्यापारी कराइरहेका छन्, ‘यता आऊ, हाम्रा उत्पादन प्रयोग गर, बिन्दास होऊ ।’ मानौँ एक चक्कीमा वा एउटा सुइमै छ— सम्पूर्ण समस्याको समाधान ।’
अकस्मात मेरो तल्लो पेट दुखेर खुनका धारा बग्न थाल्यो । हतारहतार दौडिएँ– महिलासम्बन्धी रोगको डाक्टरकहाँ । डाक्टरले प्रमाणित गरिदियो, ‘आकस्मिक र आवधिक गर्भनिरोधका साधनको लगातार प्रयोगले तिम्रो पाठेघर कामै नलाग्ने भइसकेको छ । भविष्यमा तिमी बच्चा जन्माउन सक्दिनौँ ।’ म कहालिएँ– बच्चा नभएकी आइमाई हुनु बेकार छ । एउटी महिला आमा नभई पूर्ण हुन सक्दिनँ भनेर हाम्रा सामाजिक र धार्मिक शास्त्रहरूले भनेका छन् । त्यसमा अझ पारिवारिक शास्त्र झनै कडा छ । मेरो बिग्रेको मुखाकृति देखेर डाक्टरले सान्त्वना दियो, ‘चिन्ता नगर हरेक समस्याको समाधान हुन्छ तर मैले भनेअनुसार गर्नुपर्छ । त्यसकारण तिमी जाऊ, निःसन्तान विभागमा । दुई–चार वर्ष उपचार गरेपछि होला, नभए भगवान्ले हात थापिहाल्नुहुन्छ नि ।’ उपचार र भगवान् दुवैको भरोसा दिलाएपछि कसो नहोला र बच्चा ?
यसो सोचिल्याउँछु, हैन यो आइमाईको शरीर सबैका लागि काम लाग्ने हो कि कसैका लागि पनि काम नलाग्ने हो ? सबै यसैलाई बुक गर्न खोज्छन्, हरेक अंगमाथि आधिपत्य जमाउन खोज्छन् । सबै यसैबाट नाफा बटुल्न खोज्छन् । राष्ट्रियदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म, सरकारी नीतिदेखि निजी दृष्टिसम्म महिलाकै जीउमा अधिकार जमाउन खोज्छन् । अनि एकपछि अर्को व्यापारी बुक, रि–बुक, प्रि–बुक, पोस्ट–बुक, सेड्युल बुक गर्न आइरहन्छन् । परीक्षण र प्रयोगका लागि महिलाको शरीरजत्तिकै उर्वरभूमि अरू कुनै छ ? छालाको रङ, आँखा र ओठ, शरीरको कदकाठी सबै तोकिएको मापदण्डजस्तो भएन भने महिलाको जीवन के जीवन ? अझ एक झलकमै पुरुषको नजर हरण गर्न सकिएन भने त्यस्तो महिलाको जीवन झन् के जीवन !
आमाको पेटभित्रैबाट मेरा शरीरका सारा अंगप्रत्यंग अनेकपटक अनेक–अनेकले बुक गरिसके । च्याट वा इमेलबाट बुकिङ गर्न चाहने मित्र माफ गर, अब तिमीलाई फेरि बुक गर्ने छुट छैन । मेरो शरीरमाथिका सम्पूर्ण बुकिङ म रद्द गर्न चाहन्छु । र, अब म जिन्दगीलाई एक पटक अनबुक गर्न चाहन्छु ।
वन्दना ढकाल प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १०:४२
प्रविधिको फाइदा कसलाई ?
फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले यो वर्ष इन्टरनेटको भविष्य, समाज र वरपरको विषयबारे छलफलको शृंखला सुरु गरेका छन्  । यसको सुरुआत उनले अप्रिल २७ मा इजरायली इतिहासकार एवं चर्चित पुस्तक 'स्यापियन्स’का लेखक युभल नोहा हरारीबाट गरे  । फेसबुक र युट्युबमा प्रसारण भएको यो वार्ताको सम्पादित अंश :
जुकरबर्ग : धेरै इतिहासकारहरूले बढीजसो बितेका घटनाको विश्लेषण गर्छन् । तर, तपाईंले गर्नुभएका धेरै कुरा रुचिकर छन् र भविष्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि गरेका छन् । तपाईंसँग कुरा गर्न पाउँदा म खुसी छु ।
हरारी : म पनि खुसी छु । मलाई लाग्छ इतिहासकार र दार्शनिकले वर्तमान प्रविधि र मानवताको भविष्यको विषयमा छलफल गरेनन् भने हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । इतिहासमा भएका घटनाको कुरा गरेर मात्र हुन्न, पहिलाका मानिसहरू बितिसके । उनीहरूलाई हामीले गर्ने कुरामा कुनै चासो हुन्न । चासो भनेको भविष्यको विषयमा हो ।
जुकरबर्ग : तपाईंले धेरै प्रश्न उठाउनुभएको छ । कहाँबाट सुरु गरौं ? तपाईंले उठाउनुभएको एक प्रश्न के भने । हामीले निर्माण गरेको प्रविधिबाट मानिसहरू एकजुट भएका छन् कि विभाजित भएका छन् भन्ने दुविधा पनि हो । तपाईंलाई यसमा के लाग्छ ? हामी छलफलका धेरै समय यसमा बिताउँछौं होला ।
हरारी : यदि तपाईंले इतिहासको लामो समयलाई हेर्नुभयो भने मानिसहरू धेरैभन्दा धेरै जोडिएको पाउनुहुन्छ । धेरै वर्षअघिसम्म पृथ्वी आफैंमा फरक–फरक ब्रह्माण्डजस्तो थियो । एक जातिका मानिसको अर्कोसँग सम्पर्क थिएन । बिस्तारै मानिसहरू नजिक आए र एकजुट भए । आजको दिनमा हेर्ने हो भने सारा पृथ्वी नै एक आर्थिक र सांस्कृतिक एकाइ हो । तर, कनेक्टिभिटीको अर्थ सौहार्दता भन्ने हुन्न । बढी झगडा गर्ने व्यक्ति हाम्रो परिवारका सदस्य, आफन्त, साथीभाइ र छिमेकी नै हुन्छन् । हामी मानिसलाई जोड्ने विषयमा मात्रै कुरा गरिरहेको छौं कि उनीहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषयमा गरिरहेको छौं भन्ने प्रश्नमा यो निर्भर रहन्छ ।
मानिसलाई जोड्ने कुराले धेरै द्वन्द्वतिर लैजान सक्छ । आजको विश्व हेर्नुभयो भने पर्खाल लगाउने कुराले बढी चर्चा पाइरहेको छ । अहिले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले जोडिएको जमानामा ढुंगाको पर्खालले तोड्ने चर्चा भइरहेको छ । मानिसहरू प्रविधिका कारण जोडिएका छन् धेरै पर्खाल पनि यही बेलामा बनिरहेका छन् ।
जुकरबर्ग : तपाईंले भनेजस्तै मानिसहरू जोडिएका त छन् तर विभाजित पनि उत्तिकै छन् । मलाई लाग्छ हामी ठूला अवसर र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न २१ औं शताब्दीमा उपस्थित छौं । जब म सानो थिएँ मलाई लाग्थ्यो, इन्टरनेटले मानिसलाई आफूजस्तै विचार र मान्यता भएका मानिससँग जोडिन मद्दत गर्छ । इन्टरनेटअघि मानिसहरू भौतिक अवस्थाका कारणले मात्र जोडिएका हुन्थे ।
म १० हजार जनसंख्या भएको एक सहरमा हुर्किएँ । जहाँ विभिन्न क्रियाकलाप गर्न धेरै क्लबहरू थिए । म पनि अरूजस्तै विभिन्न खेल खेल्दै हुर्किएँ । तर मलाई लाग्थ्यो म बास्केटबल र बेसबल खेल्न होइन, मेरो रुचि प्रोग्रामिङमा थियो । मेरो सहरमा मजस्ता रुचि भएका कोही थिएनन् ।
बोर्डिङ स्कुल र कलेज नपुगेसम्म मैले मजस्ता रुचि भएका साथी भेटिनँ । अहिले इन्टरनेटका कारण त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले आफूसँगै रुचि मिल्ने फरक समुदायका र संस्कृतिका मानिस भेटिन्छन् । यो कुरा मलाई जोडदार लाग्छ । आज भए म अरूसँग खेल्ने थिइनँ होला । मलाई के लाग्छ भने, विभाजित हुनु र आफूले चाहेको कुरा खोज्नु एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
हरारी : सामाजिक पक्षबाट भन्दा अनलाइनमा समुदाय पनि एकदमै राम्रा छन् । तर, उनीहरू अहिले नै भौतिक समुदायलाई विस्थापित गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । अहिले पनि धेरै त्यस्ता काम छन् जो तपाईं आफैं उपस्थित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा फाइदा र बेफाइदाका विषयमा धेरै प्रश्न छन् । अनलाइनमा मानिसलाई आफूलाई मन नलागेका विषय पन्छाउने सुविधा हुन्छ तर अफलाइन समुदायमा यो हुन्न । तपाईं मन नपरे कसैलाई फेसबुकमा अनफ्रेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तर वास्तविक जीवनमा आफ्नो छिमेकी फेर्न सक्नु हुन्न । सक्नेले ठाउँ छाडेर जालान् तर सबैको हकमा यस्तो सुविधा हुन्न । त्यसैले परम्परागत समुदायमा तपाईंले आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिसँग पनि सँगै बस्न सिक्नुहुन्छ ।
जुकरबर्ग : अनलाइन समुदायले भौतिक समुदायलाई विस्थापित गर्छ भन्न त म सक्दिनँ । भौतिक रूपमा मानिस एकीकृत बन्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
हरारी : व्यावहारिक प्रश्न भनेको फेसबुकजस्ता सेवाप्रदायकको लक्ष्य के हो भन्ने पनि हो । हामी अनलाइनको स्क्रिन छाडेर साँच्चिकै फुटबल खेल्न जाने वा फोहोर टिप्न एकजुट बन्ने समुदाय बनाउन चाहन्छौं कि जतिसक्दो धेरै स्क्रिनमा बसिरहने समुदाय बनाउन चाहन्छौं ? यही नै मुख्य प्रश्न हो ।
जुकरबर्ग : हो तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो । अर्थपूर्ण सामाजिक अन्तर्क्रिया होस् भनेर हामीले हाम्रो प्रणालीमा धेरै सुधार गरेका छौं । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले मानिस विश्वको जुनसुकै कुनामा जान सक्छ र त्यहाँ घुलमिल हुन सक्छन्, जुन कुरा धेरै अगाडिसम्म सम्भव थिएन । तपाईंको विचारमा, संसारभरका मानिसका लागि एउटै नियम र मूल्य मान्यता भएको र सबैका लागि समान हुने कुनै प्रारूप तयार पार्न सम्भव छ ? यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के हुन सक्छ ?
हरारी : सबै मानिसले जोडिन सक्ने सामाजिक वातावरणले फाइदा गर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, संसारमा धेरै समस्या छन् जसको समाधानका लागि विश्वव्यापी साझेदारी आवश्यक पर्छ । नयाँ प्रविधिले कसरी तनाव सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दा एआई (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स) जस्ता प्रविधिको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ । विशेषगरी, सशस्त्र काम गर्न सक्ने एआई, किलर रोबोटजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । विश्वव्यापी सहकार्यबिना यो सम्भव छैन किनकि हरेक देशले मैले कसैलाई मार्न बनाएको होइन तर मेरो प्रतिस्पर्धीले मात्रै बनाउँदा असुरक्षित भइन्छ भनेर बनाएको जवाफ दिन सक्छन् ।
जस्तै एआईका कारण भविष्यमा हुने रोजगारीको असुरक्षाको विषयमा पनि चिन्ता गर्नु आवश्यक छ । भविष्यमा नयाँ रोजगारी त सिर्जना होला तर के सबैले त्यसको अवसर पाउँछ ? एआईका कारण कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै पैसा थुप्रिने र अर्को क्षेत्र टाट पल्टिने पो हो कि ? क्यालिफोर्नियाका इन्जिनियरका लागि त प्रशस्त काम होला तर होन्डुरस र मेक्सिकोका ट्रकचालक र टेक्स्टायल कामदाको जागिर खोसिने पो हो कि ? एआईले दिन सक्ने झट्काको विषयमा सबै मानिसलाई तयार नपार्ने हो, एआईजस्ता प्रविधिले दिने फाइदाको बारेमा सबैले लाभ लिन सक्ने अवसर तयार नपार्ने हो भने हामी आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा बढी असन्तुलित अवस्था तयार पारिरहेका हुनेछौं, जुन यसअघि कहिल्यै थिएन ।
जुकरबर्ग : पहिला फेसबुकको उद्देश्य मानिसलाई जोड्ने मात्र थियो । अहिले भने फेसबुकको उद्देश्य मानिसलाई जोड्ने मात्रै होइन कि धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई आफूजस्तै वा आफ्नो रुचि भएको समुदाय निर्माण गर्न सघाउनेमा केन्द्रित छ । मानिसलाई स्थानीय स्तरमै काम लाग्ने गरी समस्या समाधान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
हरारी : अमेरिकाको र मिडवेस्ट अनि मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका वा अफ्रिकाका लागि उपयुक्त हुने गरी तपाईंले कसरी सन्तुलित पार्नुहुन्छ ? मलाई लागेको असन्तुलत के हो भने जब मध्यअमेरिकाका मानिसलाई रिस उठ्छ तब सबैले ध्यान दिन्छन् किनकि उनीहरूसँग शक्ति छ । मेक्सिको वा जाम्बियाका मानिसलाई रिस उठ्यो भने उनीहरूलाई कम ध्यान दिइन्छ किनकि उनीहरूसँग शक्ति कम छ । उनीहरूको पीडालाई मैले कम आँक्न खोजेको होइन, त्यो वास्तविक पीडा हो ।
विश्वमा भएको शक्ति असन्तुलनका कारण कुनै एक ठाउँको मानिसको पीडा अर्को ठाउँको पीडाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।मैले के पनि याद गरेको छु भने केही मानिसलाई अतिवादी समूहमा लाग्न प्रेरित गरेको विषयमा फेसबुकको आलोचना पनि भइरहेको छ । यो ठूलो समस्या हो तर यो नै मुख्य समस्या होजस्तो मलाई लाग्दैन । मलाई के लाग्छ भने फेसबुक मात्रै इन्टरनेट र प्रविधि अर्थतन्त्र विश्वका विभिन्न भागबीच असमानता बढाउने दिशामा गइरहेको छ । यो कुनै अतिवादी समूहको कारण उत्पन्न भएको समस्या होइन बरु केही निश्चित आर्थिक र राजनीतिक मोडलका कारण आइपरेको समस्या हो ।
औद्योगिक क्रान्तिको बेला उद्योगको स्थापनामा अघि रहेका र पछि परेका देशहरूबीचको असन्तुलन पुर्न हामीलाई यत्रो वर्ष लाग्यो । बल्ल अहिले यो खाडल लगभग पुरिएको जस्तो भएको छ । मलाई लाग्ने अर्को चिन्ताको विषयचाहिँ एआईको विकासमा केही देशले बढी लाभ लिन्छन् जसका कारण अन्य देशहरूसँग उनीहरूको अन्तर ठूलो भइरहन्छ भन्ने हो । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष असन्तुलन, एआई र मानवीय मूल्यको हो । भोलि एआईसँग प्रशस्त डाटा भएर मानिसको रोजाइ उसको विकल्पमा निर्भर हुने अवस्था आयो भने मानवीय मूल्यको के अर्थ रहन्छ भन्ने पनि हो ।
जुकरबर्ग : कसले एआई बनाइरहेको छ ? उसले किन बनायो भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । प्रविधिमा एआईको महत्त्व छ । तपार्ईंले उठाउनुभएको धेरै प्रश्नमा मेरो सहमति छ । अहिलेका धेरै प्रविधिमा अमेरिकालाई बढी सुविधा छ । यहाँ स्थापना भएका कम्पनीले पक्कै पनि यहाँका मूल्यमान्यता बोकेका हुन्छन् । महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यस्ता कम्पनीबाट लाभ पाउन अन्य देशले पनि यहाँको जस्तै खुलापन अँगाल्नुपर्छ । मैले युरोपको जीडीपीआरजस्तै खालका गोपनीयतासम्बन्धी नीति संसारभर हुनुपर्छ भन्दा मानिसहरू अचम्ममा परे । किन आफैं नियमन गर्ने कानुन माग गरेको भन्ने विषयहरू उठे । मलाई के लाग्छ भने यस्तो नीति नबन्दा हरेक देशमा फकर फरक खालको कानुनी प्रारूप निर्माण भएको छ जसले गर्दा प्रविधिको पहुँचलाई सन्तुलित रूपमा वितरण गर्न गाह्रो पर्छ । समान कानुन नबन्दा कुनै निरंकुश देशले आफ्नो सेनाको वा सरकारको जहिल्यै पहुँच हुने गरी डाटा सेन्टर आफ्नै देशमा राख्नुपर्ने माग गर्न सक्छन् ।
हरारी : एक छिनका लागि डेभिल्स एड्भोकेट बनेर सोच्दा, अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिका फस्ट, मलाई अरू देशको मतलब छैन, अमेरिकाको मात्रै मतलब छ भन्दा भारत (उदाहरणका लागि) जस्ता देशले मेरो प्रयोगकर्ताका लागि मेरै देशमा डाटा सेन्टर राखभन्दा तपाईंलाई केको आपत्ति ? अमेरिकाले आफ्नो देशको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा अरू देशले चाहिँ किन नमिल्ने ?
जुकरबर्ग : तपाईंले सान्दर्भिक कुरा भन्नुभयो । भारत खुला समाज हो भन्ने म मान्छु तर यहाँ कुरा प्रक्रियाको होइन नियतको हो । भोलि हामीले हरेक देशले भनेबमोजिम डाटा सेन्टर राख्ने हो भने निरंकुश शासन भएका देशले पनि त्यस्तै खालका माग राख्छन् । उनीहरू त्यस्ता डाटा आफ्नो जनताको सुरक्षाका लागि नभई उनीहरूलाई निगरानीका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् ।
हरारी : फेरि यो प्रश्न अमेरिकालाई अरूले विश्वास गर्छन् कि गर्दैन भन्नेमा आएर अड्किन्छ । एक दुई दशकअघिसम्म पनि अमेरिकाले आफूलाई खुलापनमा विश्वको अगुवा भन्थ्यो । उसले आफूलाई प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र खुलापनको हिमायती भन्दै आएको थियो । अहिले अमेरिकाले आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । उसले मलाई त्यो भूमिका चाहिंदैन, म अरूको मतलब गर्दिनँ भनिरहेको छ । यस्तो बेलामा अमेरिकालाई चाहिँ किन विश्वास गर्ने ?
जुकरबर्ग : यो अलि फरकखालको प्रश्न भयो । मैले भन्न खोजेको चाहिँ, अरू विकल्पभन्दा सबै देशले युरोपको जेनेरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर) जस्ता कानुन बनाउन भन्ने हो । यो अन्य विकल्पभन्दा उत्तम छ । जीडीपीआर युरोपमा सुरु भएको अमेरिकी अन्वेषण हो ।
अनुवाद : विजय तिमल्सिना
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १०:४१